फेसबुकमा भएको अश्लिल सामाग्री हटाउन के गर्ने? – Dhadingnews.com – Exploring social, politics, agricultural, health, entertainment and district news of dhading.
प्रकाशित मिति: ६ फाल्गुन २०७३, शुक्रबार ०७:१५
काठमाडौं–पछिल्लो समयमा समाजिक संजाल फेसबुकमा अश्लिल सामाग्री तथा लिंक ट्याग हुन थालेको भन्दै प्रहरीले त्यसबाट बच्ने उपाय सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीले सार्वजनिक गरेको सुझाव यस्तो छ।
तत्काल आफ्नो फेसबुकमा ट्याग तथा म्यासेजमा पोष्ट भएका त्यस्ता कन्टेन्ट हरुलाई डिलिट गर्ने । आफुले फेसबुक चलाउने गरेको कम्प्युटरमा रहेको ब्राउजरको सेसन, कुकिज फाइल एप्लिकेश डाटालाई आवश्यकता अनुसार सो कम्प्युटरबाट डिलिट गर्ने ।
६ फाल्गुन २०७३, शुक्रबार ०७:१५ मा प्रकाशित
डिजिटल क्यामेराकाे ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू
पिसावबाट चार्ज हुन सक्छ तपाईको स्मार्ट फोन !